‘बादल’ ओलीतिरै हुने भएपछि टोपबहादुर रायमाझीलाई फेरि धोका ! - Himali Patrika
‘बादल’ ओलीतिरै हुने भएपछि टोपबहादुर रायमाझीलाई फेरि धोका !
हिमाली पत्रिका ९ पुष २०७७, 11:32 am
काठमाडौं। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ओलीतिरै हुने भएपछि नेकपाका नेता टोपबहादुर रायमाझी फेरि जिल्लिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रायमाझीलाई आफ्नो समूहतिर लागे गृहमन्त्री बनाउने वचन दिएका थिए।
मंगलबार बिहान ओलीले बालुवाटारमा आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला गरेका थिए। उक्त भेलामा नेता रायमाझीले स्वागत मन्तव्य राख्दै प्रचण्डले ओली सरकारलाई असहयोग गरेका कारण आफू ओली समूहमा आएको धारणा राखेका थिए।
भेला सुरु हुनुभन्दा पहिले रायमाझीले आफूनिकट र आफूले चिनेजानेका पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई फोन गरेका थिए। फोनमा उनले ‘म गृहमन्त्री बन्दैछु, बालुवाटारमा हाम्रो भेला छ, तपाई पनि आउनुस्’ भनेका थिए। तर, उनी ओली समूहका लागेको जानकारी पाइसकेका नेता–कार्यकर्ताले उनको फोन उठाएनन्। त्यसपछि उनले अरु नेताहरुलाई फोन गर्दै ‘त्यसले मेरो फोन नउठाउने, भोलि म चाहिन्नँ, त्यसलाई भन्दिनू’ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए।
तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ओली समूहमै रहने भएपछि रायमाझी जिल्लिएका छन्। नयाँ संविधान जारी भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्री थिए। उपप्रधानमन्त्री भइसकेका कारण सामान्य मन्त्रालयमा मन्त्री भएर जान उनी मानिरहेका छैनन्। बादलले गृहमन्त्री नछोड्ने भएपछि नेता रायमाझी फेरि जिल्लिएका हुन्।
म प्रचण्ड-नेपालतिरै छुु : शेरबहादुर तामाङ
नेकपा सांसद एवं केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङ प्रचण्ड-नेपाल समूहमा फर्किएका छन्। नेकपा ओली समूहको बैठकमा सहभागी भएका नेकपा सांसद एवं केन्द्रीय सदस्य तामाङ प्रचण्ड-नेपाल समूहमा फर्किएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार र मंगलबार बालुवाटारमा बोलाएको नेकपा सांसदहरूको बैठकमा तामाङ सहभागि भएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत उनी सहभागी थिए।
प्रचण्ड-नेपाल नेतृत्वको नेकपाको बिहीबार बस्ने बैठमा आफू सहभागी हुने तामाङले बताएका छन्। दुई दिन बालुवाटार गएँ। फेरि आज कार्की ब्यांकेटमा बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जाँदैछु। अब म प्रचण्ड–नेपालतिरै फर्किएको छुु, उनले भने,यसमा हाम्रो केही दोष छैन। नेताहरूकै दोष हो। मलाई प्रचण्ड-नेपालकै कुरा चित्त बुझेकाले यतै रहने निर्णय गरेको हो।
आफ्ना सर्कलका साथीहरू र जिल्लाको मनोविज्ञान पनि प्रचण्ड(नेपालतिर भएकाले भावनात्मक रूपमा पनि यतै लागेको उनले बताएका छन्। तामाङ सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सांसद हुन्। २०७४ को चुनावपछि उनी ओली सरकारमा कानुन मन्त्री बनेका थिए।